Heesaha Casriga ah iyo Falkintooda - AGA - Akadeemiya Goboleedka AfSoomaaliga
Home Hal-abuurka & Suugaanta Heesaha Casriga ah iyo Falkintooda
Heesaha Casriga ah iyo Falkintooda
Heesuhu waa jaad-suugaaneed ka mid ah haltirinnada maansadu dallaamiso halbeegga magac-tusmayntooda. Waa jaad-tixeed mug iyo miisaan leh oo la majeerto dhuuxa murtidooda. Heesuhu waxay u kala baxaan laba qaybood oo kala ah: hees hiddeed iyo hees casri ah. Haddaba, qormadeennan gaaban waxaan ku eegi doonnaa heesaha casriga ah. Innagoo si gaar ah ugu faaqidi doona qaabdhismeedkooda, xeerarka gundhigga u ah halcurintooda, jaad-tixeedyada ay ka soohmi karaan iyo kuwa aanay ka samaysmi karin ikk. Marka hore aan yare iftiiminno curashadii heesaha casriga ah iyo marxaladihii ay soo mareen tisqaadkooda.
Curashadii heesaha Casriga ah
Soo ifbixii heesaha casriga ah, inkastoo taariikh sugan aan loo hayn geyigeenna goortii ay ka bilowdeen, haddana waxaan muran ka joogin sannadihii afartannaadkii inay ku beegan tahay curashadooda. Awal-bilowgoodii waxaa loo tiriyaa inuu lahaa Cabdi Sinimoo. Waxaa la weriyaa inuu Cabdi Sinimoo oo gaari uu wade ka yahay kaga jabay meel Boorame iyo Jabuuti u dhexeysa oo geerigo’an ah. Kolkii uu cillad bixin waayay gaariga, cid ku dhaantana ay wadada ku soo mari weyday ayay noqotay inuu cidlaciirsi li’idaa dhowr habeen ku negaado. Markay cidladii ka badatay si uu isu madadaaliyo ayuu laacay tenneg agtiisa yaallay oo uu faraha ku garaacay waxaa ka soo baxay cod habdhac wanaagsan leh. Markaas buu qaaday meerisyo cabasho ah oo xaaladdii uu ku sugnaa ku calaacalay, wuxuu yiri: Balwooy balwooy hooy balwooy. Waxaa i baleeyay baabuurreey. Balwooy balwooy hooy balwooy. Waxaa i beleeyey baabuureey.
Isagu way ku dhaafaysaa isma uu lahayn, waxayse noqotay hab hor leh oo islamarkiiba loo bogay. Dhallinyaradii baa inta la booday magaalooyinkii ku fidisay. Muddo gaaban kaddib balwadii waxay isu rogtay heello oo xagga miraha iyo miisaankaba balwada kala mid ah. Heelladii baa ka sii macaanaatay balwadii oo si weyn bulshadii ay uga daba-dhacday gaar ahaan dhallinyarada oo kaba xiisa goyn weyday. Xiisahaas saa’idka ah ee ay heelladu yeelatay waxaa sabab u ahaa, waa iyadoo nasiib u yeelatay soo ifbaxeedii inay la kowsato dhallinyaro Soomaaliyeed oo reer Cadmeed ahaa oo dalka dib ugu soo noqotay gaar ahaan dhanka waqooyiga.
Dhallinyaradaas oo taqaannay sida miyuusikada loo tumo sida: kabanka, tumbugga iyo turunbada foorida ay caanka ku tahay heelladu teeriyo maantadan in lagu qaado luuqdeeda ikk.
Dhallinyaradaas ayaa si cilmiyaysan oo farshaxannimo faneed ku dheehan tahay u qaabeeyay heelladii tisqaadkeeda. Iyagoo ku heemaaliyay miyuusig kala jaad jaad ah iyo codad kala duduwanna ku laray oo soo jiidasho leh. Taas ayaana keentay in si weyn loo wada jeclaysto dhegaysigeeda. Heelladii baa tarantay oo yeelatay magacyo kala duduwan oo lagu kala aqoonsado jaadadka ku luuqaynteeda. Heellooyinkii tisqaaday haddaan qaar ka xusno magacyadooda, waxaa ka mid ahaa:
Jowhara luula, Subcis, Raaxeeye, Ila dheel, Beerdillaacshe, Jiib, ikk. Ujeedda ahaan heelladu jacayl oo qura ayay kaga hadli jireen hal-abuurradii curin jiray. Taasina waxay sababtay in mararka qaarkood wadajirkooda loogu yeero: Qaraami ama qaraam oo afka Carabiga jacayl ku ah. Muddo gaaban kaddib heelladii waxay u xuub-siibatay heesaha casriga ah ee aynnu maanta naqaanno oo ay dhegtu u jeesho dhegaysigooda.
Jaadad-tixeedyada ay Heesaha Casriga ahi ka Soohmaan
Badanaaba haltirinnada maansada kulmiso marka gabayga iyo buraanburka laga reebo inta kale ee soo hartay sida: geeraarka, masafada, jiiftada, saarka, dhaantada, wiglada, shiribka iwm, way ka soohmi karaan heesuhu. Maadaama jaadadkan haltirineed ay beyd gaab ku tixoobaan halbeeggooda maanseed ku salayntooda heesaha waxay buuxinayaan dhammaan shuruudaha heesta looga baahan yahay codaynteeda. Balse, gabayga iyo buraanburka waxaa looga maagaa ku salayntooda heesta waa iyagoo ku maansooba tixayntooda beyddheer.
Sidaa daraadeed, way adag tahay in hees ahaan loo codeeyo meerisyadooda. Tusaale ahaan buraanburka iyo gabayga tuducyadooda oo dhaadheer ayaa caqabad keenaysa hees ka dhigidooda,
haddii la qasbana heesta ka soo baxdaa wax dhadhan iyo xiiso ah ma yeelanayso ku luuqaynteeda.
Qaabdhismeedka Heesaha loo Falkiyo.
Hal-abuurka heesaha casriga ah hababka kala duwan ee loo falkiyo qaabdhismeedkooda, labo jaad ayaan ku soo ururin karnaa oo kala ah:
Hees isku furan ah.
Hees beydadlay ah.
Heesaha isku furan.Heesaha jaadkan loo falkiyo waa la taxaa mirahooda. Heesaha isku furanka ah inta badan way ka dhaadheer yihiin kuwa beydadlayda ah. Haddaan eegno dhanka codaynta labadaa jaadee heesaha loo dhiso mirahooda, waxaa adag kuwa isku furanka ah marka loo eego heesaha beydadlayda oo iyagu ka fudud luuqsaaridooda. Heesaha isku furanka marka la codaynayo taxa mirahooda waxaa lagu kala soocaa ridmooyin kala geddisan. Tusaale ahaan 20kii meeris oo ka mid ah taxa heesta isku furanka ahi waxaa lagu codeeyaa ridmo gaar ah. Hees qura oo isku furan ah ayaa laga yaabaa in lagu codeeyo shan ridmoo kala geddisan. Taasoo xiise iyo dhadhan gaara u yeesha ku luuqaynteeda. Si aan u garanno qaabdhismeedka heesaha isku furanka ah aan tusaale u soo qaadanno heesta halkudheggeedu yahay ‘’Durdur iyo xareedeey’’oo uu curiyay AHN C/qaadir Xirsi Yamyam, uuna ku luuqeeyay Cabdalla Yuusuf Hanuuniye. Bal u fiirsada taxa meerisyadeeda qaddarka aan ka soo qaatay.
Nebi Yuusuf dabadii.
Tii dumarka quruxda leh.
Dambar iyo labeeniyo.
Dahab midabkii leeyeey.
Daawashada ku timidee.
Dalka lagu manaystaay.
Hadduu diido calafkeen.
Aan xariir ku daahiyo
Inaan dadab wadaagno.
Waqtiguna na kala diro.
Allaa deeqda bixiyee.
Anna kuuma dudayoo.
Naxariis da’weyn iyo.
Ducaan kugu sagootiyayaa
Ninka damacu raacee.
Dooqa calanka saartee.
Guur ay ka doontee.
Iga gacan danbeeyana.
Aan daraaran siiyo……. Waa socotaa…….
Heesaha Beydadlayda. Heesaha jaadkan loo falkiyo waxaa lagu saleeyaa beydad isku sargo’an mirahooda iyo kooras soo noqnoda. Tusaale ahaan heestu hadday saddex beyd ka kooban tahay iyo kooras dhextaal u ah, beyd waliba mirihiisu way ka beddelan yihiin kuwa kale, balse tiro ahaan way isla egyihiin meerisyadooda, halka kooraska mirihiisa inta badan iyagoon is beddelin uu beyd waliba oo heesta ka mid ahi ku hooro ama ku soo dhammaado.
Tirada beydadka lagu dhisayo heesta waxa ay ku xiran tahay curiyaha oo hadba ku jaangooya doonistiisa. Haddaanse soo koobno inta badan tirade beydadka lagu dhiso waxaan ku soo ururin karnaa: Laba beydlay, saddex beydlay, afar beydlay ikk. Si aan u garanno qaabdhismeedka heesaha beydadlayda aan tusaale u soo qaadanno hees saddex beydlay ah oo halkudheggeedu yahay: Rako oo uu curiyay AHN Maxamed Cali Kaariye, Hiba Nuurana ay ku luuqaysay. Bal u fiirso beydad ku salaynteeda.
Sida laba rafiiqoo
Kalgacayl is raacshaa.
Nabad inaan ku raagnee.
Inkastoon ku rabayoon.
Kuu riyaaqay maalmahan.
Rafaad noqotay buurtaad.
Adoon soo rogaalcelin.
Raartana ka soo degin.
Ra’yigayga saan qabo.
Kala raagi doonee.
Sida ramadka geeloo.
Laga reebay ubadkii.
Ama rabadin doogloo.
Reera ay ku guureen.
Inkastoo raggoo idil.
Kaa raacay adigu.
Adoon soo rogaal celin.
Sida reer abaariyo.
Ommoskaba ku riiqdeen.
Hadba meel u rarayoo.
Roob loo tilmaamaan.
Kuu daba rucleeyaa
Haddaan wax yar is-dultaagno qaabdhismeedka heestaa aan tusaalaha u soo qaadannay beydad ku salaynteeda.
Marka aad u fiirsato saddexda beyd ee ay ku salaysan tahay waxaad ogaannaysaa beyd waliba inuu lix meeris ka kooban yahay. Halkaana waxaa innooga soo baxay isku sargo’naanta beydadka looga baahan yahay in aanay meerisna is dheeraan. Geesta kale, beyd waliba haddaad gaar ugu dhugmaysato waxaad kuu soo baxaya inay kala geddisan yihiin erayada uu ku soohan yahay oo beydna aan beyd ku mira ahayn.Taana waa halbeegga looga baahan yahay dhismaha beydadka heesta.
Haddaan kooraska eegno dhextaallayntiisa beydadka heesta waxaad ogaannaysaa inuu shan meeris ka kooban yahay. Mirihii koobaad ee lagu soohay oo aan is beddelin inuu beyd waliba ku soo hooro.
Halkaa marka aan joogno waxaa xusid mudan sidaan horayba u soo niri kooraska inta badan miraha lagu sooho %99 iyagoo aan is beddelin ayay ku soo noq-noqdaan beydadka heesta, sida ku cad tusaalaha kor ku xusan.
Hees waliba oo la curiyaa xog si gaar ah loogu saafay ayay tebisaa. Xogtaasi jaadkay doontaba ha noqotee bulshaduna garan ogtahay markay dhuuxdo heesta haddaanay shareernayn. Haddaan u kuurgalno qaabka macno-gudbinta heesaha beydadlayda ah, inta badan curiyuhu wuxuu beydadka u adeegsadaa goobxaarasho uu ugu soo meela marmaro ka hor inta aannu u gelin dulucda dhambaalka uu sido, si loogu dhegraariciyo oo loo dhararo waxa uu maaggan yahay tebintooda. Halka kooraska uu ku saafo nuxurka biyadhaca heestiisa.
Gabagabada qormadeenna, haddii la yiraahdo heesaha casriga ah ha la faaqido iska daa qormooyin lagu soo koobee buugaag ayaa laga qori karaa marka loo eego baaxad-weynidooda faneed.
C/laahi Sh. Cabdi (Gacanka)